देशभर पुस्तान्तरणको मुद्दा लिएर जाने छु : लिङ्देन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
देशभर पुस्तान्तरणको मुद्दा लिएर जाने छु : लिङ्देन
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीभित्र मात्रै नभएर अन्य देशका पार्टीमा पनि पुस्तान्तरणको विषय अघि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथग्रहण कार्यक्रम बोल्दै पुस्तान्तरणको विषय सुरु भएको बताएका छन् । 'राप्रपामा मात्रै होइन देशमै पुस्तान्तरणको मुद्दा लिएर जाने छु,' लिङ्देनले भने 'राप्रपाको महाधिवेशनलाई देशका अन्य पार्टीका मानिस, बुद्धिजीवी र पत्रकारको ध्यान कम आकर्षित भएका छन् । यो ध्यानाकर्षण एमालेको महाधिवेशन भन्दा कम छैन ।'
उनले राप्रपालाई वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिमात्रै नभएर केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्ने प्रयास हुन्छ । नेतृत्वका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा कमल थापालाई पराजित गर्दै राप्रपाको बागडोर लिङ्देनको हातमा पुगेको हो ।
कार्यक्रमा थापाको अनुपस्थितिलाई समेत सम्बोधनको क्रममा लिङ्देनले उठाएका थिए । 'कमल थापा पनि यहाँ हुनु भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । फेरि पनि पूर्ण विश्वासमा छु, हामीसँगै हुनेछौं । उहाँहरुको योगदान राप्रपाले सधैं प्राप्त गर्ने छ', लिङ्देनले भने, 'पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दको भूमिका सदा जीवित राख्ने छौं ।' उनले निरन्तरतासहितको परिवर्तन देशका लागि मात्रै नभएर पार्टीमा पनि लागू हुने बताए ।
उनले नेतृत्वको मूल्याकंन आफ्नो क्षेत्रमा कति स्थानीय तह जित्यो भन्ने आधारमा हुने बताए । सम्बोधनको क्रममा उनले राजनीतिक एजेन्डा पुनर्स्थापना गर्नका लागि सदन र सडक दुवैबाट दबाब दिने बताएका छन् । राप्रपाले स्थानीय स्वायत्ततासहितको हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्ने एजेन्डा उठाउँदै आएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ १७:३८
विदेशबाट फर्कनेले ल्याउने सुन घट्न थाल्यो, कति तिर्नुपर्छ भन्सार शुल्क ?
काठमाडौँ — विदेशबाट फर्कंदा नेपालीले ल्याउने ‘अवैध’ सुनको मात्रा घट्न थालेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँचमा कडाइ गरेपछि काँचो सुनलाई गहना भनी ल्याउने क्रम घटेको हो । गहनाको रुपमा सामान्य तोडमोड गरेर काँचो सुन नै भित्रिन थालेपछि भन्सार कार्यालयले कडाइ गरेको थियो ।
भन्सार कार्यालयले गत सोमबार एकैदिन ४ सय १५ जना यात्रुबाट २१ किलो ‘अवैध’ (तोडमोड गरिएको काँचो) सुन बरामद गरेको थियो । सोमबारको तुलनामा शुक्रबार र शनिबार बरामद सुनको मात्रा घटेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख, प्रशासक महेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘शुक्रबार र शनिबार अवैध सुन हामीले कम पाएका छौं । शुक्रबार १५० जना यात्रुबाट ६ केजी २५ ग्राम र शनिबार ७४ जना यात्रुबाट ३ केजी ३१ ग्राम सुन बरामद भएको छ,’ उनले भने । यसरी बरामद भएको सुनको भन्सार महशुल तिरेर सम्बद्ध यात्रुले फिर्ता लैजान सक्छन् । ६० दिनभित्र यस्तो सुन फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था छ । बरामदपछि भन्सारको लकरमा सुन जम्मा गरिन्छ । जम्मा भएको सुन क्रमश: यात्रुले भन्सार महशुल तिर्दै लैजाने गरेका छन् ।
शुक्रबारकै दिन १६१ जना यात्रुले ६६ लाख ७४ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ भन्सार महशुल बुझाएर ६ केजी ९१ ग्राम सुन फिर्ता लगेका छन् । भट्टराईका अनुसार बरामद भएको सुनमध्ये शनिबार ७१ जनाले भन्सार महशुल तिरेर ३ केजी १० ग्राम सुन फिर्ता लगे । यसबाट २९ लाख ७९ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए । भन्सार कार्यालयले मंगलबार विदेशबाट फर्केका २ सय २१ जना यात्रुबाट ११ किलो 'अवैध' सुन बराम गरेको थियो । यसैगरी बुधबार ३ सय २६ जना यात्रुबाट १५ केजी १६ ग्राम र बिहीबार २ सय ११ जना यात्रुबाट ९ केजी ७७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो ।
कति तिर्नुपर्छ भन्सार महशुल ?
सुनका गहना र सुनमा दुई किसिमका भन्सार महशुल तोकिएको छ । विदेशबाट फर्कनेले ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउन पाउँछन्, यसमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । तर सोभन्दा माथिको गहनामा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । ५० देखि १ सय ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा प्रति दश ग्राम १० हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले र सो परिमाणभन्दा बढी थप एक सय ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रति दश ग्राम १२ हजार रुपैयाँका दरले भन्सार महशुल बुझाई फिर्ता लैजान सक्छन् । सो परिमाणभन्दा बढी ल्याएमा जफत हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर सुनमा भने केही कडा व्यवस्था छ । जम्मा १ सय ग्रामसम्म सुन ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । १ सय ग्रामसम्मको सुनमा पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ९ हजार ५ सय रुपैयाँ र त्यसपछिको ५० ग्राममा प्रति १० ग्राम १० हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ १७:३५